ရဲတပ်ဖွဲ့သတ်အတွက်သံသယရှိသူကိုရှာ - သတင်း Rule
Brasilia, ဘရာဇီး (သငျသညျ)
ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာ SPORTS Death
များစွာသောအားကစားသမား Remembering ပျောက် sports လမ်းလည်းမကြာမီ.
ကျေးလက်နေဘရာဇီးမှာရဲတပ်ဖွဲ့တယောက်သောသူထိန်းသိမ်းခံခဲ့ကြပြီးသူတစ်ဦးဘောလုံးဒိုင်လူကြီး၏သတ်နှစ်ခုအခြားသူများကိုရှာကြံခဲ့ကြ သေဆုံး, ပရိသတ်အားဖြင့် dismembered နှင့်ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံ သူသေဆုံးနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရန်ကစားသမားဓားဖြင့်ထိုးပြီးနောက်, ရဲအရာရှိတဦးကတနင်္လာနေ့ကပြောပါတယ်.
အရာရှိ Valter ကော်စတာ, ဇွန်လသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးတည်သူ 30 ကွပ်မျက်, ရဲတပ်ဖွဲ့လူးဝစ် Mora Souza ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ကြဟုဆိုသည်, 27, ဦးခေါင်းကျော်ဒိုင်လူကြီး pummeling နှင့်သူ၏မျက်နှာပေါ်သို့ cachaca ကြံရမ်တစ်ပုလင်းလေိမျ့၏ဟုသံသယရှိသူသောသူသည်. Souza ရဲ့အစ်ကို, francisco, ဆဲကိုရှာခံရနှစ်ခုတို့တွင်, ကော်စတာကပြောပါတယ်.
အဆိုပါကွပ်မျက် 20 နှစ်အရွယ်ဒိုင်လူကြီးပြီးနောက်စတင်ခဲ့, Otavio Jordao da Silva, နှင်ထုတ်ခံရကစားသမား Josemir ဆန်းတို့စ Abreu, 31, Centro ၏သေးငယ်တဲ့မြို့အတွက်တစ်ဦးအပျော်တမ်းပွဲစဉ်မှ Meio ပြုပါ, Maranhao ၏မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်. အထုတ်ပစ်ခြင်းအားဖြင့်ဒေါသထွက်, Abreu မြေပေါ်မှာဆေးလ်ဗားပစ်ချ. သူထအဖြစ်, ဆေးလ်ဗားတစ်ဦးဓါးဆွဲနဲ့ရင်ဘတ်အတွက် Abreu ဓားဖြင့်ထိုး, ကော်စတာကပြောပါတယ်, နှင့် player ဆေးရုံဖို့လမ်းပေါ်တွင်အသေခံ.
ကစားသမားများနှင့်ပရိသတ်ထို့နောက်ဆေးလ်ဗားတဟုန်တည်းပြေး, Souza ဟာဆူးတွေနဲ့ဦးခေါင်းကိုကျော်ကသူ့ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့မိမိမျက်နှာကိုပေါ်မှာပုလင်းကိုဖဲ့စဉ်ကသူ့လက်မောင်းနှင့်ခြေထောက်များအားဖြင့်သူ့ကိုဖွင့်ထားခြင်း. ရှာသောအခါခံရသံသယရှိသူတဦး, လူတချစ်စနိုး ”pirolo,” ထို့နောက် Abreu ထုတ်ချင်းခပ်ထိုးဖို့အသုံးပြုခဲ့သောဓါးကို ယူ. လည်ပင်း၌ဒိုင်လူကြီးဓားဖြင့်ထိုး, ကော်စတာကပြောပါတယ်. ဆေးလ်ဗားကိုပထမဦးဆုံးရာဌာန၌ဓါးတင်ဆောင်လာသောခဲ့အဘယ်ကြောင့်ချက်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ခဲ့.
Souza ရဲ့အစ်ကို Francisco ကပြီးတော့ဆေးလ်ဗားရဲ့လက်နက်ဖြတ်ရန်တံစဉ်ကိုအသုံးပြု, ခြေထောက်နှင့်ဦးခေါင်းကို, တော်မူသောသူကိုလယ်အလယ်၌တစ်ဦးဆူးပေါ်တင်လိုက်တယ်, ကော်စတာကပြောပါတယ်. သူက Francisco ကအချိန်မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်ပြီစေခြင်းငှါဆက်ပြောသည်.
ကော်စတာအကြမ်းဖက်မှုများ Centro က de Meio အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောခဲ့သည်ဟုဆိုသည်, နည်းနည်းရာဇဝတ်မှုနှင့်အတူတစ်ဝေးလံခေါင်ဖျားကျေးလက်ရပ်ရွာ. သူကကွပ်မျက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတို့အားအိမ်နီးချင်းမြို့များမှအားလုံးခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်.
ပြိုင်ဘက်ပရိသတ်တွေအကြားအကြမ်းဖက်တိုက်ပွဲတွေဘရာဇီးမှာဘုံဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, Centro က de Meio အတွက်သတ်ဖြတ်မှု၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဘရာဇီးမှတဆင့် Shockwave ကိုစလှေတျ, အရာပြီးခဲ့သည့်လကအဆိုပါ Confederations Cup မှအိမ်ရှင်ကစားနှင့်လာမည့်နှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပအထိပြင်ဆင်ထားသည်.
ဤဆောင်ပါး, ရဲတပ်ဖွဲ့သတ်အတွက်သံသယရှိသူကိုရှာ, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် Fox ကအားကစား နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်.
ဘောလုံး ref ရဲ့ခေါင်းဖြတ်အတွက်သံသယရှိသူဘို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရှာဖွေရေး
23266	0 ဘရာဇီး, ကော်စတာ, ဖီဖာ Confederations ဖလား, ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား, Maranhao, ခုံသမာဓိ (အသင်းဘောလုံး), ဆေးလ်ဗား, ထိုး
←7ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏သဘာဝအံ့ဖွယ် သင်တစ်ဦးလိမ့်ကျခြင်းခြောက်စက်ကိုရှေးခယျြနိုငျပုံ →